Poll - Nidaamka Baradhada
War dheeraad ah oo wanaagsan
Tifaftirayaasha bogga internetka ee majaladda Nidaamka Baradhadu waxay ku dadaalayaan inay kheyraadka ka dhigaan mid xiiso leh oo waxtar u leh akhristayaashiisa. Waxaan rabnaa inaan daabacno warar dheeri ah ...
Webinar wuxuu dhici doonaa Nofeembar 3, 2020. at 11:00 (waqtiga Moscow) Maxaa kujira barnaamijka? Abaabulka keydinta. Hadafkeeda ugu weyn. Hababka keydinta. Waa maxay...
Ku socota dareenka shirkadaha taranka iyo abuurka
Diisambar 1, 2020, cadad cusub oo daabacan oo majaladda Nidaamka Baradhada (Lambarka 4, 2020) la daabici doono. Joornaalka waxaa ku jiri doona wareegyo agab ah ...
Bogga LinkedIn ee joornaalka Nidaamka Baradhadu wuxuu horeyba u haystaa in ka badan 10 macaamiil ah!
Waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan akhristayaasha taageeradooda iyo xiisaha ay u qabaan shaqadeenna! Waxaan casuumaynaa xubno cusub! Wargeyska LinkedIn
Akhristayaasha Sharafta Leh! Majaladda "Nidaamka Baradhadu" waxay kugu martiqaadeysaa inaad soo booqato istaagitaanka aan ku leenahay carwada caalamiga ah ee lagu soo bandhigo mashiinnada beeraha "AGROSALON 2020". Bandhigu wuxuu noqon doonaa ...
Majaladda "Nidaamka Baradhadu" waxay ku martiqaadeysaa dhammaan kaqeybgalayaasha suuqa ee daneynaya inay kaqeybqaataan doodaha dhibaatooyinka beerashada baradhada warshadaha. Doodda "Su'aalaha kediska ah🙂" ee ...
Goynta, qiimaha iyo qorshooyinka mustaqbalka
Macluumaadka ugu dhameystiran ee ku saabsan sida xilligu u soo korayo, waxa goosashada ah ee laga filayo iyo qiimaha laga filayo, waxaa iska leh kaligood ...
“Ma jiro wax ka qurux badan oo ka wanaagsan dhul beereed wanaagsan,” Cicero ayaa xustay qarniyo badan ka hor, ilaa xilligaasna waxna isma beddeleen. La wadaag ...